"Na dia ny ony maro aza tsy mahavono ny afon’ny fitiavana, ary ny renirano tsy mahapaoka azy; na dia misy olona manome ny fananany rehetra ao an-tranony aza hamidy fitiavana, dia hatao tsinontsinona izy." Tononkiran’i Solomona 8:7
“Na dia ny ony maro aza tsy mahavono ny afon’ny fitiavana”: marina izany, mainka moa raha ny fitiavan’Andriamanitra no resahina! Tsy nisy na inona na inona nahavono izany, ary tsy hisy hahavono izany mihitsy. Ny fitiavan’Andriamanitra dia nampahafantariny tamin’ny alalan’ny mpaminany. Matetika anefa izy ireny no nolavina sy nenjehina. Koa niteny tamintsika Andriamanitra, tamin’ny nanirahany “ny zanany lahy malalany” (Marka 12:6). Fa Izy koa dia mbola tsy nohajaina. Ary mihoatra noho izany, nankahalaina Izy, nomelohina sy novonoina teo amin’ny hazofijaliana. Na izany aza, dia tsy “voavono” ny fitiavan’Andriamanitra. Teo amin’ny hazofijaliana no niaretan’i Kristy ny famaizana sahaza antsika noho ny fahotantsika. Tsy nitaky valifaty tsy akory Andriamanitra, noho ny nandavana ny Zanany, fa manolotra Azy ho Mpamonjy ny olona rehetra aza. Voahombo teo amin’ny hazofijaliana Jesosy no nivavaka hoe: “Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony” (Lioka 23:34). Fitiavana no nanosika sy nanohana Azy. Naniry Izy hanaja ny fahamasinan’Andriamanitra sy hanolotra famelan-keloka ho an’ny mpanota.
“Na dia misy olona manome ny fananany rehetra ao an-tranony aza hamidy fitiavana, dia hatao tsinontsinona izy”. Fisainana tsy vanona tokoa mantsy izany hoe hanakalo vola ny fitiavana izany, indrindra moa fa ny fitiavan’Andriamanitra! Tsy voavidim-bola izany, na ohatrinona na ohatrinona. Avy ao am-pon’ny Tompontsika io fitiavana io, ary mipariaka malalaka amin’ny olombelona rehetra. Ny olona rehetra eto an-tany, na manankarena na mahantra, dia mitovy lenta avokoa: samy tsy misy afaka manome na inona na inona, ho takalon’ny fitiavan’Andriamanitra, fa samy afaka mandray izany tsotra fotsiny ka miteny hoe: "Midira, ry Tompo, eo amin’ny fiainako!" ary manampy hoe: "Misaotra, Tompo ô!". Izany valiny izany no andrasany, ho setrin’ny fitiavany!